Iikhompyuter | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokususa i-Chrome Search: imiyalelo kunye neengcebiso
Wonke umntu uyazi ukuba i-Intanethi namhlanje izisa izoyikiso ezininzi kubasebenzisi beenkqubo zangoku zekhompyuter. Ukusuka apho kuvela iintsholongwane kunye neentshulube, ii-keylogger kunye nabathengisi, iintlola, kunye nabaqweqeshi beebrawuza. Kwenye yezi ...
Indlela yokukhetha i-laptop yexabiso elibizayo, kodwa unamandla? Ukuhlolwa kweengcali
Ikhompyutheni yokudlala engabizi kakhulu ingumgaqo ongenayo imida ecacileyo kwaye icacisiwe ngokucacileyo, kuba nayiphi na umthengisi evenkileni onomdla ongaphantsi okanye onomdla kwinzuzo yakhe uya kuthi ...
Ummbibi wegciwane: indlela yokufumana nokususa
Ukhuseleko lwekhompyuter ngumcimbi onzima. Kwaye bambalwa abasebenzisi abanakho ukubonelela ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kule nkqubo kwinkqubo yabo yokusebenza. Rhoqo, kukho iimeko apho ikhompyuter isulelwa ziintsholongwane. ...
I-AMD A8-6410 Inkqubo: Iimpawu kunye neziPhononongo
I-AMD A8-6410 yiprosesa ye-quad-core eyilelwe ngokukodwa iincwadana zohlahlo-lwabiwo mali. Igama lekhowudi lesi sixhobo nguBeema. I-AMD A8-6410 CPU inezi zinto zilandelayo: iphakheji ye-thermal ibonelelwe nge-15 W, ngokuthe ngqo ...
Ukwenza kunye nokumisela iserver ye "Minecraft": imiyalelo yenyathelo ngenyathelo
Ngoku uninzi lwabadlali abanomdla banomdla wokuseka iserver "Minecraft", kuba ayinguye wonke umntu onokuyenza okokuqala. Kulapha apho kukho imiyalelo eneenkcukacha kunye nezona ngxaki zibalulekileyo ezivela ...
Yintoni ekhompyutheni kunye nokuchonga? U mzekelo Iindlela zokudibanisa kunye nokuhlaziya idijithali, ulwazi kunye nolwazi olucacileyo
Ukusebenza kweekhompyuter zekhompyuter kulungiselelo lwedatha ibe linyathelo elibalulekileyo kwinkqubo yokuphucula ulawulo kunye neenkqubo zokucwangcisa. Kodwa le ndlela yokuqokelela kunye nokulungisa ulwazi yahluke mpela kule yesiqhelo, ke ifuna inguqu ...
I-Asus X200MA-Uphengululo olunenkcukacha
Cinga ilaptop yale mihla ibizwa ngokuba yi-Asus X200M. Esi sixhobo sincinci kwaye sinokukhanya kakhulu kubunzima. Ngokweempawu zayo zobuchwephesha, isixhobo sinokuhlelwa njengelaptop enemveliso. Ifakwe i-Asus X200M ...
Iinkcukacha ezahlukeneyo kwi "GTA: San Andreas" kwiipolisi
Ukuthi kwimidlalo yoluhlu lwe-GTA amapolisa anika umdlali uninzi lwenkxalabo kukungathethi nto. Amapolisa ahlala elawula zonke izitrato, agcina ucwangco, kwaye ukuba wenza njalo ...
Umdlalo wePirates Pirates: Iichibi, Iingcebiso kunye namaNyu
Ezinye iiprojekthi zomdlalo ziya ziqala ukutsala umdla wabasebenzisi benethiwekhi yoluntu. Okwangoku, zimbalwa izicelo ezinjalo, kwaye ngamanye amaxesha kunzima ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi oza kuqala ngayo. Namhlanje siza kuhlalutya ...
Uyenza njani imigibe kwi-Minecraft kwaye inokuba yintoni?
Uninzi lwabadlali abaziqondiyo ukuba yeyiphi imigibe kwiMinecraft. Bakhangela zonke iiresiphi ezikhoyo, kodwa abafumani nto injalo. Ngapha koko, akukho nto inokufunyanwa. Emva kwayo yonke loo nto, umgibe ...
Kuthekani ukuba ufuna: indlela yokudibanisa i-laptop hard drive kwi laptop, kwaye kungekhona nje ...
Ukuziqhelanisa kubonisa ukuba ukubakho kwesidingo sokudibanisa i-hard drive yesinye sezixhobo zekhompyuter kwiLaptop, okanye ukufezekiswa kwemeko yokuphinda uqhagamshele kwakhona, kuphezulu ngokungathandabuzekiyo. Umzekelo woku unokuthi ngequbuliso okanye ngokwendalo ...
Ndizijikelezisa njani izinto kwi-Sims 4? Ndizijikelezisa njani izinto kwiSims 4?
Akunakulindeleka ukuba ngoku ungafumana umntu ongaziyo ukuba uthini umdlalo we "Sims" uthotho. Esi sisilumkiso sobomi esivumela ukuba uzame kwindima yomnye umntu, uphilele ...
Witcher 3: iimfuneko zeenkqubo, usuku lokukhululwa
Iipali ezivela kwiProjekthi yeCD ziyonwabela ngetyala elikhulu lokuthembela phakathi kwabadlali abavela kwihlabathi liphela, elingafumanekiyo kuzo zonke iinkampani. Namhlanje, emathunjini e studio, umsebenzi ugcwele ngokupheleleyo kwinxalenye yokugqibela yebali ...
Ukumba phi ingqokelela kwiZombie Farm? Ifama yeZombie: Ingqokelela yeSikolo
Kutshanje, imidlalo yekhompyuter esekwe kunxibelelwano lwasekhaya ifumene ukuthandwa okukhulu. Oku kuthetha ukuba abadingi ukukhuphela umthengi, kodwa ubhaliso kwinethiwekhi yoluntu, apho kamva unga ...
Ukudlula "kokupheliswa" kwi "Warface": iingcebiso, iimfihlo
Imidlalo yabadlali beekhompyuter yabadlali abaninzi abanalo iyelenqe, ikakhulu zijolise ngqo kumoya weqela, kumoya woluntu kunye namahlakani kunye nokusukuzana nabachasi. Ke ngoko, ngeendlela ezininzi, imidlalo enjalo iyahlawula ...
Ingcambu yi ... Iinkqubo zokususa iingcambu. Intsholongwane kaKaspersky
Intsholongwane yekhompyuter inokubizwa ngokuba yinkqubo esebenza ngokunganyanisekanga kwaye yonakalise yonke inkqubo okanye indawo ethile kuyo. Wonke umdwelisi wesibini ujongene nale ngxaki. Akukho namnye ...
Uyenza njani iYandex yokukhangela okungagqibekanga?
Kumanqanaba okuqala okuphumelela "kwisayensi ye-Intanethi" kunzima kakhulu kumsebenzisi we-novice. Okwangoku, zininzi izinto ezintsha ... Njengomthetho, umntu oqalayo usebenzisa i-Internet Explorer edityaniswe kwinkqubo yokusebenza. Ukususela kuloo mzuzu ...
Ukuphindaphinda kwiMinecraft: indalo kunye nokusetyenziswa
Abadlali be-Novice banokungayazi le nto, kodwa iMinecraft inenani elikhulu leendlela ezahlukeneyo, nganye nganye yahlukile kwaye inomsebenzi wayo. Ngapha koko, iindlela ezininzi zisetyenzisiwe hayi ...
Njengoko kwi "Opera" ukutshintsha iphepha lokuqala. Ikhasi lasekhaya le-Opera
Emva kokuvula isikhangeli, into yokuqala ayibonayo umsebenzisi yiphepha lokuqala. Idilesi yayo ibhalisiwe kuseto. Yonke inkqubo eyilelwe ukukhangela iisayithi ze-Intanethi inomsebenzi onjalo. Oku ikakhulu ukulungiselela abasebenzisi. ...
Iyiphi inombolo ye-ICQ: ukusuka kubhaliso ukuya kubonxibelelwano
Ngexesha lethu, iinkqubo zonxibelelwano zikhula ngokukhawuleza okukhulu - kunzima ukuqikelela ukuba sesiphi isixhobo sonxibelelwano kwi-Intanethi esiza kubakho kwimfuno, umzekelo, ngonyaka. Into efanayo eyenzekileyo nge-ICQ-kanye ...
Page 1 Page 2 ... Page 61 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,003.